စမ်းသပ်ခုံတန်းရှည်စက်ရုံ။ | China Test Bench ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
2. OEM စျေးနှုန်း, အရည်အသွေးမြင့်မား။
CRI-200 ဘုံရထားလမ်း injector Simulator ကို
COM-D ကိုလောင်စာ inection စုပ်စက်စမ်းသပ်ခုံတန်းရှည်
PS400A nozzle validator ကို
>> ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်စမ်းသပ်ခြင်းအဖွင့်ဖိအား၊ တင်းကျပ်မှု၊ အက်တမ်စ်၊ ဆေးထိုးမှုပုံစံပါဝင်သည်။ လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ထုတ်လုပ်သူ pump pump ရရှိနိုင်သောနမူနာ
CRS300A ဘုံရထားလမ်း Simulator ကို
CRP850 ဘုံရထားစုပ်စက် Simulator
ဘုံရထားလမ်းစနစ်ရထားလမ်းဖိအားစမ်းသပ်သူဒီဇယ်အင်ဂျင်ဘုံရထားလမ်းဖိအားစမ်းသပ်မှုရိုးရှင်းစွာတိကျမှန်ကန်စွာဖြင့်ရိုးရှင်းစွာအလုပ်မလုပ်နိုင်ရိုးရှင်းစွာတိကျမှန်ကန်စွာဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည့်စက်မှုဖိအား gauge ဖိအားပြွန်နှင့်ပြproနာ, တစ် ဦး စီးရီးပျက်စီးသွားသောလောင်စာ injector နှင့်ပိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဝင်တစ်စီးရီး၏ ရေနံယိုဖိတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှု။ တူရိယာများအသုံးပြုခြင်းသည်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုအားပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ဘုံရထားလမ်း system ကို tester
PJ-40 manual injector tester သည် idealinstrument ကိုလောင်စာဆီအင်ဂျင်စစ်ဆေးချိန်ညှိခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ >> function ကို 1.Testinjector ဖွင့်လှစ်ဖိအား 2.Testatomization အရည်အသွေး 3.Testinjection ထောင့် 4.Testneedle အဆို့ရှင်တံဆိပျ >> နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameters: 1.max ဖိအား: 40MPa 2.pressure gauge အကွာအဝေး: 0-60Mpa 3.gauge တိကျမှန်ကန်မှု: 0.4 4.fuel တိုင်ကီစွမ်းရည် - ပြင်ပ၏ ၁.၆ လီတာ ၅ လက်မ (L × W × H) - ၄၃၀ * ၃၄၀ * ၃၈၀ မီလီမီတာ ၆. နက်အလေးချိန် - ၃၀ ကီလိုဂရမ် ၇ ။
S60H nozzle tester သည်လောင်စာဆီအင်ဂျင်စစ်ဆေးမှုကိုချိန်ညှိ။ စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။ >> လုပ်ဆောင်ချက် 1.Test injector ဖွင့်လှစ်ဖိအား 2.Test အနုမြူဗုံးအရည်အသွေး 3.Test ဆေးထိုးထောင့် 4.Test အပ်အဆို့ရှင်တံဆိပျ >> နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameters: 1.max ဖိအား: 40MPa 2. ဖိအား gauge အကွာအဝေး: 0-60Mpa 3.fuel အကြံပေးအဖွဲ့စွမ်းရည် : 1.0L 4.S အပြင်ဘက်၏အရွယ်အစား (L × W × H): 410 * 220 * 140 မီလီမီတာ 5.net အလေးချိန်:4ကီလိုဂရမ် 6.outer ထုပ်ပိုး: ပုံး